Buraannews.com » Maamulka Gobalka Banaadir oo sheegay in shacabka laga Saaridoono Guryaha aaney laheyn
Maamulka Gobalka Banaadir oo sheegay in shacabka laga Saaridoono Guryaha aaney laheyn
September 18, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Xoghaya maamulka Gobalka Banaadir C/kaafi Hilowle Cismaan ayaa wuxuu sheegay in dadka aan laheyn guryahooda ee dagan laga saarayo islamarkaana maamulka Gobalka Banaadir uu ku howlan yahay arimahaasi.
Wuxuu sheegay C/kaafi Hilowle Cismaan in maamulka Gobalka Banaadir uu wado qorshayaal dadka aan laheyn guryahaas dagan yihiin looga saaro islamarkaana dib loogu celinayo hantidaasi dadkii lahaa.
Xoghaya Gobalka Banaadir ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa inay dalka kusoo noqdaan islamarkaana ay ka qeyb qaataan dib udhiska dalka iminkana Muqdisho ay tahay mid nabad ah.
Hadalkan ayaa Xoghayaha Maamulka Gobalka Banaadir wuxuu ka jeediyay maanta xilli uu ka qeybgalaye xaflad lagu daah furaye xafiisyo cusub oo loo sameeyay maamulka Degmada Shibis.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay iminka tahay mid ammaan ah oo dadka Soomaalida ah ee dalka dibadiisa ku maqnaa ay dib dalka ugu soo noqonayaan